Sh.C/qaadir Muumin "Cadawga Shisheeye Wuxuu doonayaa in uu boobo Kheyraadka Soomaaliya annaguna waan ka Difaacaynaa"Dhageyso.
Monday October 06, 2014 - 18:56:40 in Wararka by Super Admin
Kalimad ku saabsan Munaasabadda Ciidda oo uu jeediyey Sh. C/Qaadir Muumin ayuu kaga hadlay Xamlada Saliibiyada Caalamiga ah ee lagu soo qaaday Wilaayadka Islaamiga, taas oo uu sheegay in uu hogaaminayo Mareykanka, laguna doonayo in lagu boobo kheyraa
Kalimad ku saabsan Munaasabadda Ciidda oo uu jeediyey Sh. C/Qaadir Muumin ayuu kaga hadlay Xamlada Saliibiyada Caalamiga ah ee lagu soo qaaday Wilaayadka Islaamiga, taas oo uu sheegay in uu hogaaminayo Mareykanka, laguna doonayo in lagu boobo kheyraadka iyo dhulka dadka Muslimiinta.
Sh.Qaadir wuxuu tibaaxay in Muslimiintu ay xamlooyinka noocan oo kale ah ka qaadaan go’aan iyo geesinimo, ayna tani tahay yaqiin ah in Manhajka Mujaahidiintu uu ku taagan yahay dhabihii saxnaa Islamarkaana ay shisheeyuhu ka zuuli doonin in ay la dagaalamaan.
Isagoo warkiisa sii wata ayuu sheeagay in iyaga xitaa hadii ay yihiin Mujaahidiinta Buuraha Golis in cadowga kusoo qaaday weeraro islamarkaana si xun loogu jebiyay dagaalka wuxuuna rajeeyay in cadawga soo duulay ay dalka soomaaliya isaga baxaan iyagoo jabay oo daallan.
"Waxay doonayaan in ay gurtaan kheyraadka Muslimiinta laakiin walaahi baan ku dhaartaye ma guran doonaan, Mujaahidiinta ayaana ka difaaci doona mana ogolaan doonno dulli iyo ihaano” ayuu yiri Sh. Cqaadir Muumin
Ugu dambeyntii Sh. C/Qaadir ayaa ugu Mujaahidiinta meel kasta oo ay joogaan ugu baaqayaan in ay kordhiyeen, sina laba jibaaraan weerarada ka dhanka ah cadowga soo duulay, Wuxuu sheegay in Xamladan ay noqon doonta middii uu ku jabi lahaa isbaheysiga sidaas darteedna loo baahan yahay in Mujaahidiinta ay kordhiyaan Dagaalada iyo camaliyaadka Istish’haadiga ah ee lagu qaadayo xarumahooda.
Halkan ka degso Kalimadda Sh.C/qadir MP3
Donald Trump Oo Qorshaynaya in uu Liiska Argagaxisada ku daro Ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Madaxweynaha Al Jazaa'ir Oo la sheegay in uu dhowaan iscasilayo.